NOOCYADA FOORMAATKA CAANAHA, BOQOSHAADA AAN LA DABOOLIN (EEG IYO SAWIR) - MUSHROOMS
Dadka wax lagu kariyo ee bilowga ah waa in aysan iloobin in ay ka mid yihiin boqoshaada, iyo sidoo kale noocyada kale ee boqoshaada, waxaa jira shimbiraha aan la dabooli karin (likaha sunta), kiiskeena - boqoshaada malab been ah. Ku saabsan noocyada boqoshaada la jilicsan yahay, sida loo kala saaro boqoshaada beenta ah, iyo sidoo kale astaamaha sumeeyaha suntan, u sheeg maqaalkeena.
Laanta buluuga ah ee guduud
Waa muhiim! Farqiga ugu weyn ee mar labaad tijaabooyin been ah waa joogitaanka giraanta lugta.
Laanta buluuga ah ee guduud waxay la mid tahay dayrta dayrta. In sawirka midigta, waxaa jira agaric malab dhab ah, iyo dhinaca bidix, lambarka lafaha ah-cas.
Farqiga ugu weyn ee laga helay xayawaanku waa xadka. Waxay leedahay qaab muuqaal ah, midab khafiif ah oo casaan ah oo ku yaal bartamaha iyo lakabta geesaha. Sida mataanaha oo dhan, dharku waa siman yahay oo qalalan.
Lugta gudaheeda waa mid madhan, khafiif ah oo siman, wakhti leh - iyadoo la leexiyo. Haddii aad jilbaha lugayso, mulkiiluhu wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro ur aan fiicnayn, laakiin kuwa dhabta ah waxay leeyihiin ari qurux badan, ugxan leh. Qaybta sare ee daboolka ah, daboolka ka dib, waxay ka soo baxaysaa geesaha.
Taargooyinka ku jira midabka isbeddelka ah ee jaalaha ah ilaa jaalaha ah. Lobenok-buluug wuxuu si gaar ah ugu koraa mashiinka dhoobada ah iyo dhirta dhicid, oo ka mid ah goobaha caamka ah waa bjørk, alert, aspen. Mar marna boqoshaada waxaa laga helaa dayrarka dhirta.
Waqtiga koritaanka ee boqoshaada lebiska-cas waa isku mid ah sida xilliga dayrta, laga bilaabo dhammaadka August ilaa barafka hore u muuqdo.
Ma taqaanaa? Faa'iidada seroplastinotny nacasku waxaa loo tixgeliyaa boqoshaada la cuni karo. Dhadashadu maaha qadhaadh.
Waxaa loo isticmaalaa diyaarinta koorsooyinka koowaad iyo labaad, cuno la kariyey. Daboolka fangaska waa dhuuban, iftiin jaale ah oo midab leh oo leh tubercle bartamaha. Dhexdhexaadiyaha ball - min saddex illaa 8 sentimitir.
Lugta sidoo kale dhuuban, oo leh qallayl. Laga soo bilaabo kor ku xusan, waa mid fudud, midab huruud ah, hoos u sii hoos marsiiyo - xiiran oo casaan ah. Midabka taarikada ee seroplastin spinyfoot wuxuu ka yimid jaale hurdi illaa cawl-bunni. Mushahar noocan oo kale ah wuxuu ku koraa kaymaha caleemaha ah, on looska geedaha.
Waa muhiim! Nacasnimada seroplastichny oo la mid ah boqoshaada sunta ah ee isku qoys, kuwaas oo loo yaqaan 'sulfur-yellow. Kala saaraan taargooyinkooda ah fungus-jaalaha, kuwaas oo leh midabka cagaaran.
Ma taqaanaa? Nacasnimada maadada ayaa sidoo kale loo yaqaan 'Psatirella watery'.
Mushinka yar ee dhallinyaradu wuxuu leeyahay dabool qurux badan, wakhti ka dibna kabartu waxay noqotaa mid furfuran. Cirifka mar walba waa la jeexay. Midabka daboolkiisu wuxuu ku xiran yahay qoyaanka: qoyaan badan, midabkiisu wuxuu noqon doonaa brown-shukulaato, oo hoos u dhigta - hooska hargabka xaydha ayaa noqon doona sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee kiriimka.
Lugta waa mid dheer oo siman, midab madow, ilaa sideed centimitir iyo badh mitir dhexdhexaad ah. Sidoo kale, likahaan wuxuu leeyahay giraan been ah oo ku yaal qaybta sare ee lugta. Mushaharka dhalinyarada waxaa lagu kala saaraa taarikada iftiinka, oo ugu dambeyntii soo noqnoqda. Deegaankan xayawaankani waa xayawaan jilicsan oo qallafsan.
Waa muhiim! Nacasnimadu waa mid aan loo maleyn in uu yahay sumayn ama fungus la cuni karo.
Nuujin jaalaha ah
Nuujin jaalaha ah oo la mid ah noocyada badan ee boqoshaada: oo leh agarics xilliga kuleylaha iyo xilliga dayrta, oo leh suuqyada seroplastin, kuwaas oo loo tixgelinayo la cuni karo. Hase yeeshee, lanonska cagaarsho-cagaarka ah ayaa iyaguna boqoshaada sunta ah.
Daboolka noocan ah ee boqoshaada waa siman oo aan lahayn miisaan. Waxay leedahay qaabka gambaleelka, taas oo wakhti ka dambeeya noqotaa sharaf. Xaglaha ayaa xoqa gudaha. Midabkeedu wuxuu u eg yahay magaca fungus, iyo cidhbaha hoose ee hooska.
Midabka taarikhdu waa midab-madow. Lugta sare ilaa sagaal mitir oo dherer ah, qaabka cylindrical, dhexroor - illaa hal mitir. Mushaharka, haddii la gooyo, uu leeyahay ur xun, midabka soodhafku waa sulfur-jaalle ah, oo ah mid joogto ah.
Scam Fob sidoo kale loo yaqaan Psatirella Candoll. Mushinka wuxuu koraa bilawga May illaa bilowga dayrta. Waxay ku nooshahay jardiinooyinka, beeraha, kaymaha isku dhafan iyo qallafsan.
Waa suurtogal in la kala saaro nooca noocaas oo kale ah oo ka yimaada dadka kale by midabka caddaanka ah iyo caddaan-cad-jaalaha ah-cadarka ee cap. Koofiyada, sida noocyada hore, wuxuu leeyahay qaabka marin, kaas oo la jaanqaado wakhti, laakiin bartamaha waxaa jira wali yar yar.
Dhinacyada geeska ee daboolka ah waxay ku yaallaan haraadiga sariirta, oo u eg sida gossamer. Dhexdhexaadiyaha ball - min saddex ilaa toddoba mitimitir. Mushaharka dhalinyarada ah wuxuu leeyahay heeso naxdin leh, dadka waaweynna waxay leeyihiin caleemo mugdi ah oo madow, oo sidoo kale u koraaya pedicle.
Midabka jilicsan ee jilicsan ee leh laydhka hoose. Dharka dhererkiisu wuxuu gaadhaa todoba ilaa toban sintimitir. Sida ugu dhakhsaha badan xilliga kulaylaha, aboorka dawacada Candolle ayaa ku tartamaya nooc kale oo halis ah. Marka hore wuxuu ku koraa hooska, tan labaad - qorraxda.
Waa muhiim! Mushroom Psatirella Candoll waa mid aad u caan ah! Wax kasta waxay u saameeyaa muuqaalka - heerkulka hawada, qoyaan, da'da fungus, habitat. Sidaa darteed, xulashada boqoshaada oo qibrad leh waxay kala saari kartaa boqoshaada kuwan ka yimaada boqoshaada la cuni karo..
Dulcooyinka: gargaarka degdegga ah ee loogu talagalay sunta
Sunta ah agaric-been ah ayaa ku dhacda mareenka caloosha iyo mindhicirka. Ka dib hal ama laba saacadood ka dib marka la cuno, agarics malab ah ayaa ku siin doona astaamaha ugu horreeya ee sumowga.
Waxay noqon doonaan kuwa isku midka ah sida kuwa kale ee sunta ah: dawakhaad, qandho, matag, matag, shuban (laga yaabe ilaa 10 jeer maalintii), xanuunka caloosha, xaaladaha aadka u daran, maskaxaha, muuqaalka iyo fuuqbaxa.
U wac ambulance si deg deg ah. Ka hor intaan imaanin dhakhaatiirta waxaa lagama maarmaan ah in la qabto dhowr hawlood:
Digriiga Gastric (waxaad u baahan tahay inaad cabto inta ugu badan ee biyaha la kariyey, joogto ah, cusbayn, oo leh xal yar oo ah kiniinka potassium).
Ku dheji matag (riix rootiga afka oo leh qaaddo, cabo matag).
Nadiifi mindhicirrada (samee enema ama cabi calaliyaha).
U qaado daawada antitoxic ah ee isku xiri doonta sunta, sida karbarka firfircoon, sorbent.
Ka saar caawimada daroogooyinka gaarka ah ee caloosha.
Lugaha ku dabool saabuun biyo kulul.
Cabitaanka dheecaan badan (cabitaanka waa in diirran yahay, waxay noqon kartaa nooc kasta oo shaaha, biyo leh liin, laakiin aan lahayn gaas!), Tani waxay ka hortagi doontaa fuuqbaxa.
Waa muhiim! Sumowga musqusha waxay u horseedi kartaa cudurro halis ah sida gaastroenteritis iyo botulism.
Samee dhammaan ficilada kor ku xusan oo ka filan dhakhtar. Sidoo kale xusuuso in shilalka kastaa uu ka fiicnaado inaanan ku dhicin wax miisaan leh oo laga shakisan yahay oo dhan, wax yar ayay u cunaan.